Xaalada itoobiya iyo Kulankii xalay Ra'isul Wasaaraha itoobiya la yeeshay Warbaahinta
HomeWararka CaalamkaXaalada itoobiya iyo Kulankii xalay Ra’isul Wasaaraha itoobiya la yeeshay Warbaahinta
Xaalada itoobiya iyo Kulankii xalay Ra’isul Wasaaraha itoobiya la yeeshay Warbaahinta
June 30, 2021 Wararka Caalamka, Wararka Maanta 0
Abiy Ahmed waxa uu xalay kula kulmay magaalada Addis Ababa ku dhawaad 100 wariye ka hawl-gala Itoobiya.
Waxa uu si adag uga hadlay xaaladda gobolka Tigray iyo go’aanka xabbad joojinta ee uu qaatay, waxa uu sheegay in uu qaatay go’aan khadhaadh: “waxa aan go’aansanay in aanaan la dhiman kooxda dhimatay ee anagu aanu ka roonaano” ayuu yidhi Abiy Ahmed.
“TPLF Tabaha ay adeegsanayeen ee cusub waxay ahaayeen in dalka laga dhigo mid daciif ah oo lagu kala baxo oo uu bilowdo dagaal daba dheeraada oo dambaska la iskaga dhigo, markii aan fahannay arrintan, isbeddelo xeeladeed ayaa loo baahday si looga fogaado in lala dhinto kooxda dhimatay. Waxaan go’aansanay inaan ka wada hadal galno usbuucan, waxa aan fahanay inaan u baahanahay, in aan shacabka siino waqti ay wax kaga bartaan qaladaadkooda, loona abuuro jawi ay bulshada caalamku ku fahmi karto runta” ayuu yidhi Ahmed Ahmed.
“Ilaa hadda, in ka badan 100 bilyan oo birr ayaa lagu kharash gareeyey gobolka Tigray gargaarka oo keliya” ayuu yidhi Abiy Ahmed.
“In kasta oo ay dawladdu dadaal ku bixisay, haddana culeys gudaha ah oo saarnaa ciidamada difaaca iyo cadaadis dibadeed oo dowladda saarnaa ayaa go’aamiyey natiijadan” ayuu yidhi Abiy Ahmed Ali.
W/Q Barre Cali Qaaje
Madaxweynaha galmudug oo Casha sharaf usameeyay Midowga Musharaxiinta iyo Golaha Wadatashiga (Sawiro)